नेपाल निर्वाचन २०७४ - प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा | LIVE UPDATE | RESULTS - बाँकेको मतगणना अन्तिम चरणमा
बाँकेको मतगणना अन्तिम चरणमा
गोविन्द देवकोटा | शनिबार, २३ मङि्सर २०७४
प्रदेश ५ बाँके
नेपालगन्जः बाँकेको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कुल क्षेत्र रहेको बाँकेमा तीन प्रतिनिधि तथा ६ वटा प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको हो। शुक्रबार दिउँसो साढे १ बजेदेखि सुरु भएको मतगणना आइतबार दिउँसोसम्म सम्पन्न हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।
एकलाख ९६ हजार आठसय ६७ मत खसेकोमा समाचार तयार पार्दासम्म ७० प्रतिशत मत गनिसकेको छ। बाँकी ३० प्रतिशत मत आइतबार दिउँसोसम्म गनेर सक्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृत विष्णु सुवेदीको भनाइ छ।
शनिबार साँझसम्म बाँके क्षेत्र नम्बर दुईका प्रदेशसभा तर्फका सबै मत गनेर सकिएको छ। क्षेत्र नम्बर दुईको चार समूहमा मत गणना भएको छ भने अन्य एक नम्बर र तीन नम्बर क्षेत्रको दुई÷दुई समूहमा मतगणना भइरहेको छ। शनिबार साँझसम्म तीनवटा प्रदेशको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ।
सार्वजनिक भएका स्थानमा दुई ठाउँमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् भने, एक ठाउँमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (ख) मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुरेन्द्र हमाल निर्वाचित भएका छन्। हमालल नौ हजार दुईसय ११ मत प्राप्त गरी विजय हासिल गरेका छन्। हमालका निकटतम् प्रतिद्वन्दी संघीय समाजबादी फोरमका दुर्गेश कुमार गुप्ताले आठहजार चारसय ३२ मत प्राप्त गरे। यस्तै शनिबार नै सार्वजनिक भएको मतपरिणाम अनुसार दुई स्थानमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। वाम गठबन्धनबाट क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभा (क) मा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार इन्द्रप्रसाद खरेल विजयी भएका छन् ।
खरेल १६ हजार ६ सय ७५ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन्। त्यस्तै खरेलका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका चन्तराम थारुले १४ हजार आठसय ११ मत प्राप्त गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर दुई को प्रदेशसभा (क) मा कृष्णा केसी (नमुना) निर्वाचित भएकी छन्।
वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार केसीले १३ हजार चारसय ३६ मत प्राप्त गरी जित हासिल गरेकी छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका सरदचन्द्र वर्माले १० हजार दुईसय ४० मत प्राप्त गरेका छन्।
प्रतिनिसभा क्षेत्र नम्बर २ को मतपरिणाम शनिबार मध्यरात सम्म आउने मुख्य निर्वाचन अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार क्षेत्र नम्बर १ र दुईको प्रतिनिधिसभा र बाँकी तीनवटा प्रदेशसभा सदस्यको मतपरिणाम आइतबारसम्म आइपुग्ने छ।
पछिल्लो विवरण अनुसार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका महेश्वर गहतराज अथकले अग्रता लिएका छन्। भने अथकलाई कांग्रेसका माधवराम खत्रीले पछ्याइरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ मा संघीय समाजबादी फोरमका मोहम्मद इस्तियाक राई अग्र स्थानमा देखिएका छन्। वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिकका संयुक्त गठबन्धनलाई पछार्दै राई प्रतिनिधिसभा सदस्य जित्ने दाउमा छन्। मध्यरातसम्म क्षेत्र नम्बर दुईको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने भएको छ। पाँच हजार मतले अग्रता लिएका राईको जित सुनिश्चित जस्तै देखिएको छ ।
प्रदेश सभा २ क मा पनि संघीय समाजबादी फोरमका विजय यादवको अग्रता कायमै छ। उनले तीन हजारको मत अन्तरले कांग्रेसका निरन्जनसिंह सिंजापतिलाई पछाडि पारीरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार नन्दलाल रोकाय अगाडी छन् भने, क्षेत्र नं. १ (ख) रु क्षेत्र नम्बर ३ को (ख)को मतगणना शनिबार रातीबाट सुरु भएको छ।